Football Khabar » विश्वकप छनौट खेल निर्माणाधीन दशरथ रंगशालामा खेलाउने तयारी : सम्भावना कति ?
विश्वकप छनौट खेल निर्माणाधीन दशरथ रंगशालामा खेलाउने तयारी : सम्भावना कति ?
सन् २०२२ मा कतामा आयोजना हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत एसियन क्षेत्रको छनौट खेलको ड्र हालै सार्वजनिक भएको छ । नेपाल समेत खेल्ने सो प्रतियोगिताको तयारी थालिएको छ । जसमा नेपालले खेल्ने विश्वकपका छनौट खेलअन्तर्गत ‘होम म्याच’ काठमाडौंमा निर्माणधीन दशरथ रंगशालामा खेलाउने गरी तयारी अघि बढेको छ । होम एन्ड अवे अवधारणामा हुने खेलमा ‘होम म्याच’ हाल निर्माण कार्य भइरहेको दशरथ रंगशालामा खेलाउन तयारी थालिएको हो ।
नेपाल दोस्रो चरणको एसिया छनौटको समूह ‘बी’ मा परेको छ । जसमा नेपालले चार देशसँग जम्मा ८ खेल खेल्नेछ । त्यसमा अबको ३ महिनाभित्र ३ खेल आफ्नो घरमा खेल्ने तालिका छ । कूल ८ खेलमधये नेपालले ४ खेल आफ्नो देशमा र ४ खेल अवे मैदानमा खेल्नेछ । एक होम म्याच भने अर्को साल २०७७ मा मात्रै हुनेछ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले छनौट खेलअन्तर्गत होम म्याच दशरथ रंगशालामा खेलाउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । उनले खेलको मितिअगावै रंगशाला तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्देशनसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पनि मैदानमा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार बनाउन आजैबाट काम थालेको छ । नेपालले पहिलो होम म्याच आगामी भदौ १९ गते खेल्नेछ । सो खेलअघि नै रंगशाला पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नुपर्नेछ ।
नेपालले आफ्नो घरमा दोस्रो खेल भदौ २४ मा चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दा अन्तिम होम म्याच असोज २८ गते जोर्डनसँग खेल्नेछ । चौथो खेल भने अर्को वर्ष मात्रै हुनेछ ।
नेपालमा हालसम्म दशरथ रंगशालाबाहेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कुनै पनि रंगशाला छैनन् । निर्माणाधीन रंगशालामा अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल खेलाउन आवश्यक मापदण्ड पूरा हुने गरी बनाउनुपर्नेछ ।
हाल रंगशालाको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । तर, राखेपका निर्माण शाखा प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले भदौ १९ मा रंगशाला पूर्ण रूपमा तयार हुन कठिन रहेको बताएका छन् । निर्माण कार्य जारी रहे पनि छनौट खेल गराउने सम्भावना भने ज्यादै न्यून रहेको बताए ।
भदौ १९ गते – होम म्याच
जेठ २२ गते (२०७७) – अवे म्याच
प्रकाशित मिति ४ श्रावण २०७६, शनिबार १०:३७